HEERARKA WAXBARASHO EE ARDEYDA SOOMAALIYEED LA YIMAADAAN WADANKAN PAKISTAN | Laashin iyo Hal-abuur
Intaa kabacdi. Iskastoo eeysan jirin cid tirakoob rasmi ah ku sameeysey ardeyda Soomaaliyeed ee wadankan Pakistan waxkabarata, hadana waxaa lagu qiyaasaa illaa Kun wax la jiraan (1000+) ardey. Waxeey aad ugu badan yihiin magaalooyinka kala ah: Karachi oo ah halbowlaha dhaqaale ee wadankan Pakistan, kuna dhanyihiin tasiilaadkastoo ardeyba u baahankaro. Waa magaalo eey aad ugu yaryihiin Somalida waxbarasho ama ganacsi la�aan iska joogta. Lahore ayaa iyana kusoo xigta marka la eego tirada ardeyda Soomaaliyeed ee wadankan waxkabarata. Sidoo kale Heydarabad ayaa kaalinta 3aad soo cariirsaneysa. Islamabad oo ah Caasimada aadna uga yar magaalooyinka aan horey usoo sheegey, aad ayeyna ugu soo jabeen Soomalidii rabtey in Qoxooti ahaan dibada loogu qaado, kuwaasoo ka kala yimid: Soomaaliya, Itoobiya, Kenya, Yugaandha iyo Masar xiliyadii sida aan caadiga aheyn wadankan Soomaalida looga xaabin jirey, dabcan waa wixii �11-September�ka horeeyey. Sidaa daraadeed inta waxkabarataa aad ayey uga yaryihiin inta camal la�aan iska joogta.Wey jiraan ardey ku firaarsan magaalooyinka kale sida: Beshawar, Quetta, Nawabshah iyo kuwa la midka ahba. Xaqiiqduse waxeey tahay; inkastoo Ardeyda Soomaliyeed badanaa magaalooyin gaar ah ku badan yihiin, hadana gobolkastaahiba ardey Soomaaliyeed ayaa wax ka barata oo joogta, maxaa yeeley waa wadan waxbarasho nuxur lihi taal aadna u jaban, ummadii sidaa u fahamsanna ey ka faa�ideysan karto. Waana Allaah mahadii.
Hadaan usoo laabto ciwaanka. Waa muhiim in waalidku ubadkiisu wax baro, si berri aan asaagii ugu xamaalan ama eysan u yasin, waliba waa muhiim in qorshaha waxbarashada ubadka u habeysan yahay sida: waqtiga iskuulka lageyn lahaa, da�da lagu geyn lahaa, illaa heerarkiisa jaamacadeed, si ardeygu awood ugu yeesho in uu sii higsado tacliinta sare ee heerarka kala duwan ee jaamacadeed. Waxaa muhiim ah in ardeyga marka horeba si wanaagsan looga soo dhiso tacliinta asaasiga ah ee: Dugsiga Hoose, Kan Dhexe iyo Midka Sareba, si ardeyga maskax diyaarsan asaagii wax kula qeybsado, mustaqbalkana u noqdo mid diintiisa, dadkiisa, dalkiisa iyo naftiisaba anfaca. Nasiib wanaag hadii ardeygu helo waalid aqoon leh waxey u badan tahay in uu helo hage khibrad u leh wadada ugu haboon ee ubadkaasi tahay in la marsiiyo ama uu maro, waxaa sidoo kale xusid mudan in eey jiraan waalid waayo aragnimo iyo waxgaradnimo darteed si dhab ah u dareensan muhiimada waxbarashu u leedahay ubadkooda iyo sida eey nolosha asaasiga ugu tahayba, sidaa daraadeedna naf iyo maalba u hura sidii ubadkooda wax u baranlahaayeen.
Aabe Soomaaliyeed waagiisii horena dhaqaale lahaa laakiin waqti ka daba yimid, waaya arag 14wadan soo mareyna ah, ayaa wuxuu damcay in uu ubadkiisa geeyo mid ka mid ah iskuulada wadanka ugu wanaagsanaa dagaalada kabacdi aadna qaali u ahaa,waxaa aad ula yaabay nin qaraabo dhow eey ahaayeen oo dhaqaale fiican markaa heystey, markaana odeygaaba uu u shaqeynayey. Ninkii dhaqaalaha lahaa ayaa odeygii ku yiri � War ninyahoow adigaaba nolol maalmeed la dirir ahe, maxaad labadan wiil kala dooneysaa iskuulkaa aadka qaaliga u ah, kuweenan (Ilmaheenan) ayaanba kala baqney anagoo kaa dhaqaale badane!?�
Aabihii Soomaaliyeed ayaa ugu jawaabey �Walaal dhaqaalaha Allaah ayaa bixiya, hadii Allaah isoo galiyana aqoontooda ayaan ku bixinayaa ,hadii kalase hade cidna eedi maayo, waxaanse kuu sheegayaa hadii xitaa jikadoodu u baahantahay waxbarashadooda ayaan ku bixinayaa si Ilmaheygu (Gabdho iyo Wiilalba) beri eysan ii dhihin AABAHEEN WAXBA MA UUSAN INA SOO BARIN!!!�. Nasiib wanaagse Aabahaa Soomaaliyeed ubadkii uu sidaa nafta ugu hurayey waxbarashadooda, waxey maanta ka mid yihiin ardeyda Soomaaliyeed ee Masters-ka ka dhameyneysa wadankan Pakistan. (Ilaahoow Aabahaa Jannatul Firtowsa ku abaal mari.Aamiin).ugu dambeyn. Heerarka waxbarasho ee Ardeyda Soomaaliyeed layimaadaan wadankan Pakistan, waxaan u kala qaadi karnaa Afar qeybood.
1-Qeyb tacliin asaasi ah oo dhameytiran leh
Nasiiib wanaag, Waxaa jira qeyb tacliin asaasi ah oo dhameystiran leh, Allaah-na fursadaa qaaliga ah usaamaxay in eey helaan, ayadoo waliba wadanku dagaal ahli ah ka dhacay, qaxna ummadii ku ridey. Waa Alle mahadiiye, Waalidka qaarkii ayaa ku mintidey in ardeygoodu meeshuu tagaba kasii wato waxbarashadiisa. Iskuulaad furnaa weyjireen markasta, haba ugu firfircoonaadaan iskuuladii Carabiga ku baxayey, xitaa ardeydii mudada qaxa ku maqneyd markii eey soolaabteen waxbarashada iskuulaad eey kasii wataan wey helayeen- waloow goboladu kala wanaagsanaayeen guud ahaan Soomaaliya-. Iskuulada khaarkood waxaa loo sameynayey ardeyda barnaamijyo waxtar weynaa sida: Khaas, Khaasulkhaas, iyo Tamhiid-kaba, kuwaasoo ula jeedada ugu weyn ee laga lahaa aheyd in ardeyga loosoo kabo waqtigii horey uga dhumey ee ka khasaarey intii dagaalada Ahliga ahi kacsanaayeen, ayadoo ardeyga uu si xowli ah u qaadanayo fasalada oo idil ayadoon labootinin ee meeshuu sanadba fasal dhigan lahaa, dhowr fasal ka gudbayo halkii sanaba, illaa leyska dabakeeno da�diisa iyo heerkiisa aqooneed.
Ardeyda wadankan soo gasha ayagoo leh tacliin asaasi ah oo dhisan, waa kuwa ugu tirada yar laakiin ugu tayada wanaagsan (The Most Brilliant) marka laga eego dhinackasta, gaar ahaan u diyaarsanaanta tacliinta sare, waana wax qofkastaahi fahmi karo, maxaa yeeley isku mid ma noqonayaan laba askari oo goob dagaal u wada socda, midna latagayo tababar hufan iyo qalab milatari oo casri ah, halka kan kale waxtababar ah aanu laheyn,! Dadaalkuse waa wax jira oo kaalin weyn ayuu ka cayaaraa guulkastaa oo shaqsi ama ummadi gaarto. Ardeydaa laf ahaantooda waxaa loo kala saari karaa laba qeybood:
A-Qeyb luqada eey wax kusoo barteen aheyd English, ha kusoo qaateen dhamaan tacliinta aasaaska ah oo dhan ama Secondary-ga oo kaliya�e. Hadiiba ardeygu sifiican uga dhisanyahay luqada English-ka iyo maadooyinka kala ah: Xisaabta, Biology-ga, Chemistry-ga iyo Physics-ka, waxeey u badantahay in uu guuleysto, Taqasus kastaaba ha doortee.
B-Qeybta 2aad ee ardeydan Base-koodu dhisan yahay ayaa ah, kuwa luqada eey wax kusoo barteen aheyd Carabi oo wadankan aan wax lagu baran. Ardeygii inkastoo tacliin wanaagsan uu la yimid wadankan, hadana weero Cilmiyeedkii (The Scientific Terminologies) oo dhan luqad kale ayuu kusoo qaatey, waa rafaad iyo dhib hor leh, maxaa yeeley inta aan tacliintii ula jeedaduba aheyd aan la gaarin, hadiiba dhibkaadu noqdo luqadii wax lagu baranayey ee Lecture-kuba ku baxayey. Inkastoo eey jiraan ardey qeybtan ah oo si gaar ah machadyada Englishka laga barto isaga soo dhisey Luqada English-ka, dal iyo dibad meeshuu rabo haku yaallee.
2-Qeyb tacliin asaasi galabgalab ah leh
Qeybtan Ardeyda ah, waa kuwa aan soo marin tacliin dhameystiran. Waa kuwa qaab bood bood ah wax kusoo bartey. Qaarbaa Dugsiga Hoose ama Dhexe uga soo tagay waxbarashadii. Kuwo kale ayaa Dugsiga Sare uun soo qaatey. Qaarna fasalka Dugsiga Sare ugu dambeeya oo kaliya ayey soo fariisteen.
Wadanku markuu burburey, ninkastaahiba wuxuu yaqaaney ayuu ku shaqeysi tagay, ayadoo qaarba sida eey u arkaan in eey sax tahay ugu shaqeysanaya. Waa xaqiiq in waxbarashadu noqotey dagaaladii Sokeeye kabacdi, mid ka mid ah ganacsiyada ugu waaweyn wadanka, maadaama dowladi eeysan dabataagneyn. Waxaa jirey iskuulaad qaabkii tacliinta lagu yaqaaney wax kuwaday, halka qaarkoodna hadba sida ugu fudud ee lacag eey ku kasban karaan marba u weecinayeen qaabka eey wax u barayeen Ummada. Waxaa jirey iskuullo imtixaanaad qaada ayagoo isu eegaya da�da ardeyga iyo aqoontiisa, fasalka uu u qalmana sidaa ku fariisiya, ayadoo aan ardeygaa iyo waalidkii dhalay midkoodna la qayaamin oo aan been loo sheegin, ayadoo la fariisinayo meel uusan aqoon ahaan gaarin.
Nasiib darrase waxaaa iskuuladaa wanaagsan barbaryaacayey, iskuullo kale oo imtixaan inta qaada, adoon waligaaba fasalba arag toos Dugsi Sare kuu fariisinaya oo halkaa kaaga bilaabaya.
Waxaa jirey ardey iskuul dhiganayey oo 2-jeer ku dhacay fasalka 6aad ee Dugsiga Hoose (waa tiiba Carabigee: Saadis Ibtidaa�I) ee mid ka mid ah Iskuulada wadanka ku yaalla. Waa laga bixiyey iskuulkii uu ku dhacay, wuxuuna imtixaan u galay iskuul kale. Waxaa la fariisiyey fasalka ugu dambeeya ee Dugsiga Sare ee iskuulkii kale! -laga yaabe in iskuulkaa uusan heysan markaa ardey u fariisata fasalladaa Sare!- ardeygii halsano kabacdi wadankan Pakistan ayaa looga gadey Boos Caafimaad ah, lagana bixiyey dhowr kun oo Dollar. Dabcan maaha maado eey sahlantahay barashadeedu, laakiin waalidkoo lacagtaa iska bixin karayey, ayey taladu sidaa la noqotey. Waxaa ardeygii la geeyey mid ka mid ah jaamacadaha Caafimaadka ee Pakistan kuwa ugu wanaagsan ee aan ogoleyn wax �Laalaab�ah, oo hadii buundooyinkaadu ka hoosmaraan xad hore loo cayimey ama maadooyinka lagaaga baahnaa in aad ku baasto aad ku dhacdo, markaa jaamacadaba lagaa eryayo. Nasiib daro! Mudo aan sidaa usii badneyn kabacdi, dib ayaa Soomaaliya diyaarad loogu Saarey ardeygii kadib markii jaamacadii laga soo eryey. natiijaduna waxey noqotey: Lacag, Waqti iyo Mustaqbal qasaarey. Sayidku wuxuu beyt ku yiri �Nin Rag ahey Dardaaran u tahee Doqoni yeelkeede�.
3- Qeyb aan wax tacliin asaasi ahba laheyn laakiin siyaabo kale isu soo dhisey
Duruufaha aduunyadu kala duwan, qofwalbana si ayuu u qaabilaa. Dadka qaarkii ayaan helin waalid wax bara intii eey yaraayeen, sabab ha u ahaato waalidkoon awoodin oo nolol maalmeedkaba kabadin waayey, ama in eysan fahamsaneynba muhiimada aqoonta. Qaar ayaaba baadiye uga soo tagay waalidkood oo magaalada ayaga uun isku haayey intii eey ka weynaanayeen. Noloshii hore sidii eey rabtaba haku soo martee, kooxdan markii eey weynaadeen ayey fahmeen in eey asaagood waxbarasho wax kula qeybsadaan. Waqtigii Dugsi Hoose ama mid Dhexe la fariisan lahaana laasoo dhaaf oo Gar iyo Shaarbo ayaa la yeeshey (waloow aan aqoonta laga weynaan), waxeey galeen iskuulada la iskaga dhiso maadooyinka Seyniska iyo Luqadaha. Gudaha wadanka ama Pakistan markii eey yimaadeenba ha is dhisaanee. Waloow badanaa aad qeybtan ku maqleyso hebel maadadii ama taqasuskii wuu iska badaley, hebelna jaamacadii wuu kabadashey oo tukale ayuu bilaabey, hebelse jaamacadii markuu mudo la xarbinayey ayuu isaga tagay. Laakiin xaqiiqdu waxeey tahay, Inkastoo Base-kii ka maqanyahay hadana waa nin iyo dadaalkii.
4-Qeyb tacliin asaasi ah iyo isa soo dhisid kale toona aan laheyn
Qaarka ugu daran waa qeybtan nasiib daradu ku dhacdey ee aan laheyn wax tacliin asaasi ah, ayaguna aan private-yada leyska soo dhiso aan soo aragba. Waa nasiib darro waalidkii ubadkooda iska heystey illaa eey ka noqonayeen 20jirro, ayagoon maalinna iskuul geyn, ama aan ku cadaadin hadey diideen xitta waxbarashada.
Bal Akhristaha sharafta badanoow qisadan ila dhuux duruusta farahabadani eey ku jirto. waxaan maqli jirey �Waa yaabka yaabkiise, horta wiilka yaa dhalay�. Akhristoow Ardey waalidkii ka mid yihiin Ganacsatada waaweyn ee wadankeenii, ayaa waxey wiilkooda usoo direen wadankan Pakistan, si uu jaamacad wax uga soo barto! Ardeygaa waligii lama geyn wax iskuul ah, marka laga reebo private uu isticmaalka Kumbuyuutarka dhowr bilood ka dhiganayey. Markuu Pakistan yimi ayuu xaqiiqsatey in eeysan talo wanaagsan aheyn in uu shafka ku qaado jaamacad. Wuxuu go�aansadey in uu bal iskuul is geeyo. Iskuul aad u wanaagsan ayuu tagay, imtixaan ayaa laga qaatey, waxeey aqoontiisa u qalantaa ayey yiraahdeen: 5aad �ogoow ardeygaa jaamacad ayaa waalidku usoo direene!- Waxaa maamulkii soo jeediyeen in aan la fariisin Karin 5aad, maxaa yeeley wuxuu noqonayaa OWR la dhexfariisiyey WAXARO! ardeydaa aadka uga yaryar darteedna aqoonta ayuu aad ugasii niyadjabayaa dabcan wuuna isku buuqayaa, sidaa daraadeed waxeey yiraahdeen waxaan fariisineynaa 9aad oo qaar la muuqaal ahi dhigtaan. Nasiib darrase ardeyda fasalkaa fadhisa hala muuqaal ahaadaane aqoontana makalasimanyihiin!? Waa ardey fasalka 1aad ka hor sadex fasal soo marey, markii eey jireen Labo sano iyo barna qaarkood iskuul lagu bilaabey. Waa ardey maadooyinka eey ku qaadanayaan fasalka 9aad waligood soo arkayey oo maalinba wax loogu kordhinayey. Nasiib darase walaalkeen meelkale oo da�diisa darteed la fariisin karo ayaa loo waayey sidaa ayuuna ku yimi fasalka Sagaalaad. Macallinkii soo galaba wuxuu ka bixiwaayey horey ayaan usoo qaadaney casharkan! Meel hiblaayo ayaad kusoo aragteen casharkan! wixii kalana sharaxaad yar markuu ku taabtaba Ardeyda ayaa waan fahamney!!! ugu jiibisa macallinka. Aydeygii wuxuu muuqaal ahaan sii dhamaadaba fikir joogta ah dartii, wuu u adkeysan waayey, Mudo kabacdina wuu iskaga tagay iskuulkii. Xogaa markuu waxbarasho la�aan joogey, waalidkuna �heerkee ayaad waxbarashadii ka mareysaa?� leeyihiin ayuu nasiib daro wadankoo idilba isaga tahay. Ugu dambeyn, Waxaan rajeynayaa in waalidka iyo inta rabta in eey si dhab ah wax u bartaanba eey ku cibro qaadan doonaan qisadan.
W/D: Cabdulqaadir Maxamed Cismaan (Cabdi Boqor).
BBA (Horns), MBA (in Progress).